Ilain'ny tanora izany
"Fa Hianao no fanantenako, Jehovah Tompo ô, ry tokiko hatry ny fony aho mbola tanora" - Salamo 71:5
Tsy vitsy amin'ireo tanorantsika lahy sy vavy no mahalala ny finoana kanefa tsy mbola voakasiky ny herin'ny fahasoavan'Andria¬manitra ny fony. Ahoana no hisehoantsika ho mpanompon'An¬dnamanitra isan'andro, eny mandri¬tra ny andro rehetra, mandritra ny herinandro mihitsy kanefa tsy hiraika amin'ny toerana misy azy ireo? Raha ho faty ao amin'ny faho¬tany izy ireo, tsy nandrav fampitan¬dremana, ny rany dia hadinina amin'ny tananan'ireo mpiambina tsy nanome azy ireo fampitandremana.
Nahoana moa ny asa atao ho an'ireo tanorantsika no tsy tokony hoheverina ho asa fitoriana ambony? Mitaky fahaizana mifandray, fiheverana manokana, vavaka mafana hahazoana fahendrena avy any an-danitra izany. Ny tanora no tanjon'i satana amin'ny asa manokana ataony; kanefa ny fahalemem-panahy sy fanajana ary ny fiantrana izay miboiboka avy amin'ny fo feno fitiavana an'i Jesôsy, dia hahazo ny fitokisan'izy ireo, ka hamonjy azy amin'ny fandrika maro alefan'ilay fahavalo.
Mila fiheverana bebe kokoa sy teny fampaherezana manokana ny tanora. Mila asa voatandrina sy feno vavaka ary voakendry izy ireny (...) Matetika izy ireo no lalovan¬tsika fotsiny amin'ny tsy firaihana satria tsaraintsika amin'ny fisehoany ivelany, no manana ao aminy ilay fitaovana tsara indrindra ilain'ny mpiasa, sy hanome ny hery rehetra nomena azy.
Tokony hahatsapa tanteraka ny andraikiny amin'ny maha mpano¬rina toetra azy ny ray aman-dreny advantista. Apetrak'Andriamani¬tra eo anoloan'izy ireo ny tombon¬tsoa hampiroborobo ny Asany amin'ny alalan'ny fanokanany ny zanany sy ny asa ataon'izy ireo. Fanirian'Andriamanitra ny hahita tanora marobe mivondrona avy ao amin'ny tokatranon'ireo mambra izay nanolotra ny fony ho Azy, ka hiroso amin'ny fanomezana Azy ny fanompoana lehibe indrindra eo amin'ny fiainany noho ny toetra araka an'Andriamanitra maha¬taona avy ao amin'ny tokan¬tranony. Amin'ny alalan'ny fitari¬hana sy fitaoman'ny tari-dalana avy amin'Andriamanitra ny tokan¬trano, ny hery miasa mangina avy amin'ny vavaka maraina sy hariva, ny fahatokian'ny ray aman-dreny tia sy matahotra an'Andriamanitra no nianaran'izy ireo hatoky an'Andriamanitra ho mpampianatra azy, sy maha¬vonona azy hanolotra fanompoana ankasitrahany amin'ny maha zanakalahy sy zana-kavavy maha¬toky azy. Ny tanora toy izany no voaomana haneho amin'izao tontolo izao ny hery sy ny fahasoavan'i Kristy.